ဘာပဲလုပ်လုပ် အဆင်မပြေပဲ ဒုက္ခတွေ့နေလား ? လွန်စွာအကျိုးထူး ဒီနည်းလမ်းကို လုပ်ကြည့်ပါ – Myanmar
ဘာပဲလုပ်လုပ် အဆင်မပြေပဲ ဒုက္ခတွေ့နေလား ? လွန်စွာအကျိုးထူး ဒီနည်းလမ်းကို လုပ်ကြည့်ပါ
September 16, 2020 admin Knowledge, Life Style, Wonder 0
တစ်ချို့ လူတွေမှာ ကံလေးကောင်းလာရင် စီးပွားရေးလေးခဏကောင်းလာပြီး ကံညံ့လာရင်စီးပွားပြန်ကျသွားတတ်၏။ တစ်ချို့သူတွေမှာ အလုပ်လွန်စွာလုပ်၏၊ ဥာဏ်လည်းအလွန်ကောင်း၏၊ ပညာလည်းအလွန်တတ်၏၊ ဝီရိယလည်းလွန်စွာရှိ၏။
ဘာလုပ်လုပ် ၊ ဘာကိုင်ကိုင် အဆင်မပြေသူများလည်းတွေ့ရတတ်၏။ ကံဇာတာက ကောင်းပေမယ့်လည်း အဆင်မပြေသူများလည်းရှိတတ်၏။
နည်းတစ်ခု ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ များစွာ ထဲမှာ ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါး အနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ မိဘ ဆရာ ကျေးဇူးရှင်များကို စော်ကားပြောဆိုမိလို့ ဖြစ်တာများ၏။ အထူးသဖြင့် မိဘ တွေနဲ့ အခန့်မသင့်တဲ့ အခါမှာ ဝစီကံ မနောကံ နှင့်ပြစ်မှားမိ ပြန်ပြောမိရင်ဖြစ်တတ်၏။
မိဘတွေကလည်း ဂရုဏာဒေါသ ဖြင့်ပြောဆိုပြီး ဝမ်းနဲပက်လက်နှင့် မျက်ရည်ကျတဲ့အခါမှာ ကျိန်ဆဲမိသလိုဖြစ်တတ်၏။ ထိုအခါတွင် သားသမီးမှာ ဒဏ်ခံရတတ်၏။
ဘာလုပ်လုပ် ဘာကိုင်ကိုင် ရှေ့ကိုမတက်ပဲ တဝဲလည်လည် ဒုံရင်းက ဒုံရင်းသာရှိနေတတ်၏။အဆင်ပြေတော့မယ် ကြံတာနဲ့ အဖျက်ဝင်လေတော့၏။ ဘေးဒုက္ခများတွေ့တတ်၏။
“မိဘမျက်ရည်တစ်စက် သားသမီးဆင်းရဲတစ်သက်” ဟူသော စကားသည် ရှိ၏။
စိမ်ရည်သင့်သည်ဟု ခေါ်ကြလေ၏။ ဂိုဏ်းသင့်သည်ဟုခေါ်လေ၏။
ထိုကဲ့သို့ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ မိဘ ဆရာ ကျေးဇူးရှင်တို့ရဲ့ စိမ်ရေသင့်ထားသူများ ဂိုဏ်းသင့်ထားသူ များသည် လွန်စွာ ဒုက္ခများကြရ၏ တစ်ချို့ဆိုလျှင် ဘဝပေါင်းများစွာ သံသရာ အထိပင် ဒုက္ခရောက်တတ်သေး၏။
လွန်စွာကြောက်စရာကောင်းလှ၏။ ဒီဘဝမှာ ကိုယ်က မပြစ်မှားမိပေမယ့် အတိတ်ဘဝတုန်းက ပြစ်မှားမိရင်လည်း ဖြစ်တတ်၏။
ထိုကဲ့သို့ စိမ်ရည်သင့်ထားသူများ ဂိုဏ်းသင့်ထားသူများ အနေနဲ့ အောက်ပါ ယတြာအစီအရင် ကိုပြုလုပ်ကြည့်ပါလေ။
(၁)မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာ အိမ်မှာရှိတဲ့ ဘုရားဆင်းထုတော်ကို ရေသပ္ပယ်ပါ။ ဆင်းထုတော်မရှိသူများ ဘုရားစင်ကို ရေဆေးချပါ။ အကြမ်းအရင်ဆေးပြီး ရေသန့်နဲ့ အချောဆေးချတဲ့ အခါမှာ ထိုရေကို ခံပြီး ပုလင်းတစ်လုံးထဲ ထည့်ထားပါ။
(၂) သံဃာတော်များပရိတ်ထားတဲ့ ပရိတ်ရေကိုယူပါ။
(၃)မိမိနဲ့မွေးနံတူတဲ့ (တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ စသည်ဖြင့် ) မြင့်မြတ်သော ရဟန်းသံဃာတော်ကို ပစ္စည်းလေးပါးလှူပါ ဒကာခံပါ ၊ မိမိရှာလို့ရတဲ့ အထဲက အနည်းငယ်ဖြစ်စေ မိမိတတ်နိုင်သလို အဆင်ပြေသလို မကြာခဏလှူပေးပါ။
အမြဲတမ်းကိုးကွယ်ထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ သံဃာတော်ကို ဆွမ်းကပ်ပါ၊ ဆွမ်းကပ်တဲ့ အခါမှာ လက်ဆေးတဲ့ရေကို ယူထားပါ။
(၄)မိဘနှစ်ပါးကိုလည်း ကျကျနန ကန်တော့ပြီး တောင်းပန်ပြီး လက်ဆေးရေယူထားပါ။
မိဘမရှိတော့သူများ ကျေးဇူးရှိသူရဲ့ လက်ဆေးရေကို ယူပါ။ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပုံကိုခေါင်းရင်းမှာ သေသေချာချာ ချိတ်ပြီး နေ့စဉ်ကျကျနန ကန်တော့ပါ။
ထိုဓာတ်ပုံဘောင်ကို ရေဆေးတဲ့အခါမှာ ရတဲ့ရေကို ပုလင်းတစ်လုံးထဲမှာ ထည့်ပြီးသိမ်းထားပါ။
(၅)ဆရာသမားကိုလည်း ကျကျနန ကန်တော့ပြီး တောင်းပန်ပြီး လက်ဆေးရေကိုလည်း ယူထားပါ။ ဆရာသမားမရှိတော့ဘူးဆိုရင် ဆရာသမားရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ခေါင်းရင်းမှာ သေသေချာချာ ချိတ်ပါ နေ့စဉ်ကန်တော့ပါ။
ဓာတ်ပုံကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့အခါမှာ ဆေးတဲ့ရေကို သိမ်းထားပါ။ အဲဒီရေ(၅) မျိုး (သို့မဟုတ်) ရသလောက်ကိုရောပြီး ခေါင်းလျှော်တဲ့ အခါမှာအသုံးပြုပါ။
အဲ့ဒီရေနဲ့မျက်နှာသစ်ပါ။ အဲ့ဒီရေလျော့သွားရင် ထပ်ပွားထားပါ။
ယနေ့ခေတ်တွင် သံဃာဂိုဏ်းသင့်သူများ မိဘစိမ်ရေ သင့်သူများ ဆရာဂိုဏ်းသင့်သူများ များစွာတွေ့နေရ၏။
(၂)နှစ်အရွယ်သားကို မစောင့်ရှောက်ချင်တော့လို့ သမီးကြီးကို တရားစွဲခဲ့တဲ့ မိဘနှစ်ဦး